देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेका तथ्यांक आइरहेका छन् । तर, त्यो तथ्यांक रामेछाप सदरमुकाम मन्थली माविको हकमा मिथ्यांकजस्तो लाग्छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकको दुवैको विश्वास कति जितेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहाल विद्यार्थीको चाप कसरी थेग्ने भन्ने चिन्तामा हुन्छन् ।
कुनै समय मन्थली मावि कति बदनाम थियो भने कतिपयले नारा नै बनाएका थिए, ‘पढाइ हैन, सर्टिफिकेट चाहिए मन्थली जानू’ । एउटा विद्यालयले त शिक्षक भर्नाको आह्वान गर्दा ‘मन्थली माविबाट उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र लिएर आउनेलाई आवेदन फर्म भर्न दिइन छैन’ भनेर सूचनै जारी गर्यो ।
विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक गुञ्जबहादुर श्रेष्ठ, हालका प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहाल र अर्का शिक्षक चन्द्रसिंह धामी लगायतका शिक्षकहरुलाई त्यसले नमीठोसँग छोयो । र, उनीहरु विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लागे ।
गुणस्तर सुधार त गर्ने तर कसरी ? अभिभावकहरुलाई जसरी पनि छोराछोरी पास हुनैपर्ने । विद्यार्थी पढाइमा ध्यान नदिने तर परीक्षाको बेलामा चिट चोरेर भने पनि पास हुनैपर्ने । शिक्षकहरुले पनि सिकाइमा त्यति ध्यान नदिने । अस्तव्यस्त विद्यालय ।
प्रधानाध्यापक गुञ्जबहादुर श्रेष्ठ विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक अवस्था सुधारका लागि आप्mनो सबै समय त्यहीँ खर्चन लागे । त्यसमा तत्कालीन सहायक प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहाल दिलोज्यान दिएर लागे । श्रेष्ठसँग शैक्षिक क्षेत्रको लामो अनुभव थियो अनि दाहालको युवा जोस । यो डिजाइनमा साथ दिए, दार्चुलादेखि आएका शिक्षक चन्द्रसिंह धामीले ।
प्रधानाध्यापक दाहालको बुझाइमा विद्यार्थीको आकर्षणको महत्वपूर्ण पाटो गुणस्तरीय शिक्षा नै रहेछ । ‘एकपटक हामीलाई निकै गाह्रो पर्यो, भएका विद्यार्थी सबै बोर्डिङ जान थाले, नयाँ आउँदै आएनन्’, उनले सुनाए, ‘सबै कुरामा सुधार गर्दै लगेपछि विद्यार्थीको चाप बढ्यो । बिस्तारै धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिएका हौँ ।’
अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ
पहिले–पहिले अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा फेल हुन्थे । अंग्रेजी राम्रो भएन भन्ने अभिभावकको गुनासो थियो । अंग्रेजी राम्रो होस् पनि कसरी ? ४ कक्षामा पुगेपछि बल्ल ए, बी, सी, डीको पढाइ सुरु हुन्थ्यो । त्यसैले पनि अभिभावकहरु अंग्रेजी भाषाकै लागि छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउँथे ।
‘सबैभन्दा पहिला हामीले शिशु कक्षाबाट अंग्रेजी भाषामा पढाइ सुरु गर्यौं’, विद्यालय सुधारका लागि गरेको प्रयत्नको बेलिविस्तार लगाए प्रअ दाहालले । अहिले शिशु कक्षादेखि ३ कक्षासम्म पूर्ण रुपमा अंग्रेजी भाषामै पठनपाठन हुन्छ । ४ कक्षादेखि १० कक्षासम्म अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा पढाइ हुने गरेको छ ।
४ कक्षाबाट १० कक्षासम्म अंग्रेजी भाषामा पढ्न चाहनेको लागि छुट्टै सेक्सन छ । अनि नेपालीमा पढ्न चाहनेका लागि छुट्टै सेक्सन । अहिले अंग्रेजी भाषामा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या आधाभन्दा बढी छ । ‘अब तीन वर्षभित्रमा अंग्रेजी भाषामा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छ’, प्रअ दाहालले भने । यस वर्ष एसईईमा ३६ विद्यार्थीले अंगे्रजी भाषाबाटै परीक्षा दिएका छन् ।
पहिले बोर्डिङ स्कुल गएका विद्यार्थी अंग्रेजी भाषामा पढाइ हुन थालेपछि विद्यालयमै फर्किए । नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थी त झन् बोर्डिङको खर्चिलो पढाइमा किन जान्थे ? निःशुल्क रुपमा अंगे्रजी भाषामा पढाइ जो भएको थियो ।
शैक्षिकसँगै भौतिक सुधार
२०१२ असोज १२ गते मन्थलीको बरको बोटको चौतारोबाट सुरु भएको सो विद्यालयले २०३५ सालमा निमाविको स्वीकृति पायो । सोही बेला बनाएको विद्यालयको कच्ची भवन २०४५ सालमा रामेछापबाट सदरमुकाम मन्थली सरेपछि सरकारी कार्यालयले कब्जामा लिए । त्यसपछि सानीमदौ वन उपभोक्ता समूहले दिएको ५० रोपनी जग्गा र स्याउलाले बारेको छाप्रोबाट सुरु भयो विद्यालयको पढाइ ।
अहिले त विद्यालयमा भौतिक रुपमा पनि आमूल परिवर्तन भएको छ । पक्की भवन नै चार वटा छन् । यसबाहेक थुप्रै ब्लक भवन पनि बनेका छन् । विद्यालयका शिक्षक टंकप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘२०४५/०४६ सालमा हामी पढ्न आउँदा बस्नका लागि घरबाटै बोरा लिएर आउँथ्यौं । धुलोमा डुबिने स्याउले छाप्रोमा दिनभरि बसेर पढ्थ्यौँ ।’
अहिले उनलाई त्यो कुरा सपनाजस्तो लाग्छ । पक्की घर, सुविधानजनक डेक्स बेन्च, अत्याधुनिक मिडिया हल, कक्षा कोठामा सीसी टीभीका क्यामरा । कन्ट्रोल रुमबाटै विद्यार्थीहरुलाई निगरानी, राष्ट्रिय गान, योगा र ध्यान, मल्टिमिडियाबाट क्लास । देशभरिका २ सय २२ वटा नमुनाउन्मुख विद्यालयमध्ये मन्थली मावि पनि परेको छ ।
एउटै छानोमुनि सबै शिक्षा
मन्थली मावि शैक्षिक क्षेत्रको त्यस्तो छानो हो, त्यहाँ सबै खालको पढाइ हुन्छ । शिशुदेखि १० कक्षासम्म अंग्रेजी र नेपाली विषयमा पढाइ हुन्छ । ११ र १२ मा शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी विषयको पढाइ हुन्छ । अनि प्राविधिकतर्फ १८ महिने सिभिल सबओभरसियर, १८ महिने इलेक्ट्रिकल सबओभरसियर, तीनवर्षे सिभिल डिप्लोमाको पढाइ हुन्छ ।
यही छानोमुनि बीबीएस, बीएड, बीए र एमए (नेपाली) तथा इपीएमको पनि पढाइ हुन्छ । मन्थली माविसँगै सहकार्य गरी स्थापना भएको मन्थली पोलिटेक्निकले कृषि विषयको तीनवर्षे बालीविज्ञान डिप्लोमा पढाइरहेको छ । अहिले शिशुदेखि १० कक्षासम्म १ हजार १ सयभन्दा बढी र ११ र १२ कक्षामा ६ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । हाम्रो कथा अनलाइनबाट
प्रकाशित २२ बैशाख २0७५ , शनिबार | 2018-05-05 05:16:59